Onye na -emepụta ihe na onye na -ebubata akụkụ CCMIE
Ọnụ ọgụgụ niile: 25000kg
Ibu ibu: 9200kg
Mkpokọta ihe nkiri na -adọkpụ: 70000kg
Max. arụ ọrụ nso: 4000mm
Max. Mgbatị kwụ ọtọ: 32000mm
Onye na -ebutu akụkụ chọrọ naanị otu onye ka ọ jiri njikwa ime obodo na -arụ ọrụ mbuli elu n'akụkụ iji buo na budata akpa site na/gaa n'ụgbọala, ma ọ bụ ụgbọala na -adọkpụ. A na -ejikarị ụdị ihe nkwụnye ihe n'akụkụ ọdụ ụgbọ mmiri ọdụ ụgbọ mmiri ma ọ bụ ọdụ ọdụ ụgbọ mmiri na -ebufe yaadị. Anyị nwere ike iji ụgbọala na -adọkpụ ihe dị n'akụkụ iji ghọta njikwa akpa n'ụzọ dị mfe, dị ka itinye na ibutu akpa.
CCMIE anyị nwere ike imeju ndị ahịa anyị a na-akwanyere ùgwù ezigbo mma, ọnụ ahịa asọmpi na ezigbo enyemaka, n'ihi na ndị otu ahịa anyị na ndị na-ere ahịa azụchaala nke ọma na ịdị uchu, ma mee ụlọ ọrụ anyị ka ọ bụrụ onye na-ebubata akụkụ China na uru ọnụ ahịa. Otu n'ime okpueze ahịa. A na -eji igbe 40ft na -ere isi traktọ nke 371HP, a na -erekwa chassis nke 371HP na ihe mbuli akụkụ 20ft. Inye ngwaahịa na-aga n'ihu jikọtara ya na ezigbo ọrịre ahịa na nkwado mgbe ịre ahịa na-eme ka asọmpi siri ike n'ahịa ụwa na-arịwanye elu. .
Otu n'ime akụrụngwa njem ụgbọ mmiri kachasị ewu ewu na China, rute stacker na lifter akpa, a na -ebuga ndị ahịa na UK, Germany, France, Spain, United States, Canada, Iran, Iraq, Middle East na Africa . Ndị ahịa nabatara ngwaahịa anyị nke ọma, nwere ọnụ ahịa asọmpi na ụdị kachasị mma. Anyị na -atụ anya ịmalite mmekọrịta azụmaahịa n'etiti ndị ahịa niile ma weta agba mara mma karịa na ndụ.
Nhazi pụrụ iche gbasara ịhazigharị sistemụ nchekwa
N'oge ọrụ nke onye na-eburu akụkụ niile, enwere sistemụ nchedo mgbochi nwere ọgụgụ isi n'otu akụkụ nke mpụga iji nyochaa nkwụsi ike nke igwe ahụ niile ozugbo. Ọ bụrụ na enwere ihe ịdaba ihu, ọ nwere ike na -akpaghị aka ma kpọchie nke ọma; a na -echebe akụkụ nke ọzọ nke onye na -apụ apụ site na mkpọtụ iji gbochie akpa ahụ abanye na mpaghara dị ize ndụ. Ngwa nke efere nchara siri ike agabigala nyocha ngwanrọ dị elu na nnwale siri ike iji hụ na nchekwa na ntụkwasị obi; n'otu oge ahụ, agbakwunyere akara hydraulic dị elu, nchedo ọkụ eletrik dị elu, usoro mkpọchi dị nchebe na ntụkwasị obi, yana ọrụ nkwụsị mberede ihe dị irè na nke dị mma. Nchekwa
Nke gara aga: Ụgbọala nọ n'elu akpa a na -ebuli ihe
Osote: Ihe nrịbama ebuli ihe
Ihe Nwepu Ihe
Ụgbọ ala Forklift
Ihe Nwepu Akụkụ akpa